बारुला: मन नपरे पनि निकै गुनिला हुन्छन् कीराहरूको संसारका यी 'सिंह' - BBC News नेपाली
बारुला: मन नपरे पनि निकै गुनिला हुन्छन् कीराहरूको संसारका यी 'सिंह'
जोनाथन एमस बीबीसी विज्ञान संवाददाता
तस्वीर कपीराइट NATURAL HISTORY MUSEUM
Image caption लन्डनको प्राकृतिक विज्ञान सङ्ग्रहालयका ग्याभिन ब्रोड बारुलाका ठूला प्रशंसक हुन्
साङ्लो मार्ने उत्तम विधि थाहा पाउन चाहनुहुन्छ?
सबैभन्दा पहिले साङ्लाको मस्तिष्कमा पुग्नेगरी शक्तिशाली न्यूरोटोक्सिनको सुई दिनुहोस्। त्यसपछि ऊ हलचल गर्न सक्दैन र तपाईँले चाहे जस्तै हुन सक्छ।
डा. ग्याभिन ब्रोड बारुलाले कसरी अरू जीवहरूलाई खाइदिन्छ भन्ने विषयका कथा सुनेर निकै रमाउँछन्। उनी लन्डनको न्याचुरल हिस्ट्री म्युजिअम (प्राकृतिक विज्ञान सङ्ग्रहालय) का प्रमुख सञ्चालक हुन्। उनी धेरै विषयमा ज्ञान राख्दछन्।
Image caption एम्पुलेक्स कम्प्रोसा भनिने बारुलाले प्रकृतिमा कीरा नियन्त्रण गर्न सहयोग गरिरहेको हुन्छ
उनीसँग विश्वका विभिन्न कुनाबाट सङ्कलन गरी ल्याइएका बाकसका बाकस बारुलाहरू छन्। "साङ्ला मार्न सक्ने भए पनि मलाई बारुलो मन पर्दैन" भनेर तपाईँले भनेको मैले सुनिसकेँ।
तर केही बेर ग्याभिनको कुरा सुन्नुभयो भने तपाईँको दृष्टिकोण बदलिन सक्छ। तपाईँ उनीहरूको सीप र सुन्दरताबारे थाहा पाएर आह्लादित हुनुहुनेछ।
साङ्ला मार्ने बारुलाको निकै बलियो र चम्किलो शरीर र पखेटा हुने गर्छ। त्यसैले उनीहरूलाई रत्नजस्तो बारुलो पनि भन्ने गरिन्छ।
"तर प्रत्येक बारुलाका आफ्नै विशेषताहरू हुन्छन्," ग्याभिन भन्छन्। उनी खपटेकीरा वा मौरीलाई मात्रै रुचाइने प्रवृत्तिबाट अलि गहिराइमा जान आग्रह गर्छन्।
उनी भन्छन्, "मौरीहरू शाकाहारी बन्न पुगेका रमाइला खालका बारुला हुन्।"
प्रकृतिमा बारुलाको आफ्नै भूमिका हुन्छ। उनीहरूले शरद् याममा मानवलाई बाधा पुर्‍याउँदैनन्। सेप्टेम्बर महिनामा यी पहेँला कीराले फलका रस सेवन गर्छन् र मदमस्त हुन्छन्।
बारुलाले अन्य कीराहरू खाइदिन्छन् र तिनको सङ्ख्या नियन्त्रण गर्न सघाउ पुर्‍याउँछन्। तपाईँले कल्पना गर्न सक्ने सबै कीराका सायद आफ्नै कुनै बारुला हुन्छन् जसले तिनलाई आक्रमण गर्छन्।
यदि त्यसो नहुँदो हो त हामी कीरा मार्नका लागि निकै धेरै विषादी प्रयोग गरिरहेका हुन्थ्यौँ।
Image caption राइसा पर्सुएसोरिया जातको बारुलाको लम्बाइ ८ सेन्टिमिटरसम्म लामो हुन्छ
परजीवी बारुला र तिनकै सीपले अन्य कीराहरू नियन्त्रण गर्न सहयोग गरिरहेका हुन्छन्।
युरोपेली बारुलोको विशेषता थाहा पाएर म छक्कै परेँ। मैले उनीहरूलाई प्रकृतिमा कहिले देखेँ भनेर स्मरण गर्न सक्दिनँ। तर उनीहरू ब्रिटेनका जङ्गलमा जताततै देखिन्छन्।
यसको जीउलाई तन्काउनका लागि पेटको पुछारतिर एक प्रकारको अङ्ग हुन्छ जसले धेरै काम गर्न सक्छ। उदाहरणको लागि त्यसले त्यो बारुलाको लम्बाइ बढाएर ८ सेन्टिमिटरसम्म पुर्‍याइदिन सघाउ पुर्‍याउँछ।
यसले रुखको टोड्कामुनि रहेका अरिङ्गालका लार्भा खोज्छ। भेटिहाल्यो भने उसले जीउलाई पूरै तन्काएर त्यो लार्भामा फुल पारिदिन्छ। यो बारुलाले सिकारलाई मारिहाल्दैन, यसले विषको प्रयोग गरेर सिकारलाई शिथिल बनाएर राख्छ।
ग्याभिन भन्छन्, "परजीवीमा आश्रित बारुलाको सफलता भनेकै आफ्नो सिकारको मासुलाई ताजै राख्नु हो।"
गर्मीले भाले कीराको प्रजनन क्षमतामा ह्रास
त्यो बारुलाको पेट १५ सेन्टिमिटरसम्म तन्किन सक्नेरहेछ। फुल पार्ने पारा यसको अझै फरक हुने रहेछ।
प्रकृतिको नियम आफ्नैआफ्नै। विभिन्न प्रजातिहरूले बाँच्न र फस्टाउनका लागि विभिन्न कल कौशलको प्रयोग गर्ने रहेछन्। त्यसक्रममा लडाइँ पनि धेरै हुने गर्छ।
Image caption पेप्सिस हिरोस नाम गरेका बारुला सम्भवत: सबैभन्दा ठूला बारुला हुन्
ग्याभिनले बारुला भरिएको त्यो बाकस बन्द गरे।
उनले बारुलाका प्रजातिको बखान गर्ने क्रममा झुसिल्कीरा बनिसकेको अर्को बारुलाको लार्भाभित्रै फुल पारिदिने बारुलाको प्रसङ्ग सुनाए। त्यो भनेको त राजाहाँसभित्रको कुखुराको मासु भित्रको हाँस भने जस्तै भयो।
सबैभन्दा ठूलो बारुला कुन होला? सायद पेप्सिस भनिने बारुलो सबैभन्दा ठूलो हो। ससाना केटाकेटीलाई बारुलाको कुरा सुनाउने बेला ग्याभिन यो प्रसङ्ग छुटाउँदैनन्।
अब बुझिहाल्नु भयो होला - बारुलो माकुरोमा बस्छ, त्यसपछि त्यसलाई ठुङ्गेर बेहोस तुल्याउँछ र त्यहाँ फुल पार्दछ। त्यसपछि त्यो फुलभित्र जान थाल्छ। त्यसपछि बन्ने लार्भाले सबै अङ्ग एकैचोटि खाँदैन र त्यो माकुरालाई जीवितै रहन सहयोग गर्छ।
Image caption दक्षिण अमेरिकी बारुलाको गुँड। यो रुखमा झुन्डिएको पातजस्तै देखिन्छ
सबैभन्दा सानो बारुला कुन होला?
किकिकी र टिङ्करबेला भनिने बारुला सबैभन्दा साना हुन सक्छन्। ग्याभिनले एउटा कार्ड बोकेका छन् र त्यसमा प्रष्ट देख्न नसकिने थोप्लाहरू छन्। यी बारुला ०.२ मिलिमिटर लामा छन्। यी एकदमै साना हुन्छन् जसलाई हेर्नका लागि सूक्ष्मदर्शक यन्त्र नै आवश्यक हुन्छ।
ग्याभिन भन्छन्, "सायद बारुलाहरूले नै मानिसलाई कागज बनाउन सिकाए होलान्।" उनीहरू काठ चपाउँछन् र पातलो झिल्लीदार संरचना बनाउँछन्।
शरद् ऋतुमा देखिने बारुलो पनि वास्तुकलाविद्जस्तै हुन्छ। त्यो बारुलोको सानो गुँडवरिपरि कागजको खामको पत्र हुने गर्छ। त्यहाँ भित्र पनि कलात्मक पत्र र बान्कीहरू रहेका हुन्छन्।
त्यो सङ्ग्रहालयमा सन् १९४० को बारुलाको एउटा गुँड पनि रहेछ। त्यसको केही हिस्सा ऊनबाट बनेको रहेछ। नजिकै रहेको एउटा स्कार्फलाई बारुलाहरूले पुन: प्रयोग गरेका रहेछन्।
ग्याभिन भन्छन्, "बारुलाहरूलाई मानिसले माया गर्नुपर्छ। उनीहरू कीराको संसारका सिंहहरू हुन्।"
तस्वीर कपीराइट JOHN T HUBER
Image caption सानो जातको फेरिफ्लाई भनिने बारुलो
भिडियो के कीराले हावाबाट पानी सङ्कलन सीपले संसारको पानीको अभावलाई कम गर्छ